Incoko yevidiyo Masithethe ujoyine!
Ina kwi-Chat Chat masithethe, le yincoko yevidiyo apho abantu abahlukeneyo banxibelelana besebenzisa ikhamera yewebhu kunye nemayikhrofoni, dibana nathi.
Ukuba umntu obhalelana naye kwincoko yokubhaliweyo wathumela ifoto ekulahlekisayo kwaye kukho amathandabuzo okuba yayingenguye, kodwa ngumntu owahlukileyo (ahlala amantombazana kunye nabafana befaka iifoto zemodeli zefashoni, abantu abadumileyo kunye nabantu abaziqhelileyo), ke zilunge kakhulu ingxoxo yevidiyo iya kuba sisisombululo sakho Masithethe
Xa ubona umntu omaziyo kwangoko, jonga emehlweni wakhe, umthemle. Ngokungafaniyo nengxoxo yombhalo, ividiyo yencoko ayiyi kuvumela umntu othatha inxaxheba kuye ukuba axoke, kuba uya kubona ngokukhawuleza zonke iimvakalelo zakhe ebusweni bakhe. Kwincoko yevidiyo uza kukwazi ukunxibelelana, ukwenza ubuso ngobuso, ukudlamka omnye komnye, ukuthumela izithuko zomoya kunye nokunye okuninzi kakhulu. Kwaye bonisa iimpahla zakho ezintsha, funda umbongo wento yakho okanye ucule ingoma, bonisa umfanekiso wakho, njl njl.
Izibonelelo zokuncokola Masithethe
Incoko inezibonelelo ezimbini eziphambili. Ukuba awumthandi umntu othetha naye, oqala ngokuziphatha ngokungacocekanga, sebenzisa intetho engamanyala kunye namagama abhekiswa kuwe, ngoko unokulitshintsha ngokukhuselekileyo iqabane lakho ekuchukumiseni iqhosha .. Ngokungafaniyo nengxoxo ebhaliweyo, incoko yevidiyo Masithethe siyakuvumela ukuba usondele ngexesha elifutshane kakhulu nomntu omthandayo, kuba apha unxibelelwano luyenzeka, ungathi uyaphila. Ubudlelwane bakho buza kuqala ukukhula ngokukhawuleza, kwaye kungekudala uya kudibana ebomini bokwenyani, kodwa iya kuba libali elahlukileyo ngokupheleleyo!
Ingxoxo yevidiyo bukhoma ngaphandle kokubhaliswa
yevidiyo engalibalekiyo Ingxoxo kaGy-Gyr!
Ingxoxo yevidiyo kunye neenkwenkwezi ze-YouTube u-Ivangai
Xoxa Umntu ngencoko engaziwayo!
Ingxoxo Esi sibini singxoxo engaziwayo!
1 Izimvo kwincoko yeVidiyo Masithethe usijoyine!
Ngaphambi kokuqala unxibelelwano, kufuneka ubonakalise ubulili bakho, kwaye emva koko ukhethe ngokucacileyo ukuba ungathanda ukuthetha nesini. Emva koko iqhosha elithi "Khangela" licinezelwe kwaye umntu wokuqala sele ebonakala kwisikrini esiphezulu. Kwisikrini esisezantsi ubona umfanekiso wakho. Ukuba ufuna ukuthetha nomnye umntu, cofa nje iqhosha u- "Okulandelayo". Imiyalezo inokutshintshelwa kwifestile ekhethekileyo kwicala lasekunene lenkundla ngokumisela okanye ukuguqula isandi sezaziso. Unokubona ukuba bangaphi abantu ngexesha elinikiweyo lokunxibelelana kule ndawo
izibonelelo zencoko yevidiyo yaseRussia "Masithethe"
Le nkonzo inezibonelelo ezininzi: amandla okwenza abahlobo abatsha. Vuma ukuba ukufumana abahlobo abatsha kuhlala kunomdla! ithuba lokungathethi kuphela ngamazwi okanye ngokubhala, kodwa nokucingisisa ngembaleki. Akunyanzelekanga ukuba udibane nokudana okungathandekiyo kwintlanganiso ezayo, kuba unxibelelwano lwenziwa phantse kukuphila. ukulula kunye nokusebenziseka. Ividiyo ethi "Masithethe" incoko ye-intanethi esebenza ngendlela ethandanayo yokuthandana, ukuba ngenxa yesizathu esithile umntu akonwabanga nawe, unokuqhubeka nokukhangela abantu othetha nabo ngokunqakraza kwiqhosha "elilandelayo". Ukusilela kwesidingo sobhaliso kunye neenkcukacha zobuqu. Le nyaniso iququzelela kakhulu inkqubo yokwazi inkonzo kwaye ikhawuleze ukuqaliswa kokusetyenziswa, ukongeza, itsala abasebenzisi abangakumbi abangathandi ukuchitha ixesha kwizinto ezisemthethweni.
Ngubani ohleli kwincoko yevidiyo engaziwayo "Masithethe"
yangaphandle yencoko yevidiyo akukho okunye
Inkonzo yethu ye-
ayinikezeli sizathu sokufumana isithukuthezi nakubani na, kuba kwincoko ungasoloko udibana nabantu abadala kunye nabantu abanomdla ngokwaneleyo abakulungeleyo, incoko kumdla kwaye, mhlawumbi, ngeepranks ezilula. Yiyo loo nto incoko yevidiyo ethi "Masithethe" ithandwa kakhulu ngabantu abaneminyaka eyahlukeneyo kunye nesini. Abasebenzisi abaninzi bade baqonda ukuba ividiyo yencoko yaseRussia ethi "Masithethe" yinkonzo elula, elula nelula enika ithuba elihle lokudibana nabantu abangasetyenziswanga ukwenza oku ezitratweni, kwimivalo, ikhefi nakwezinye iindawo zikawonkewonke. Usebenzisa isiza esifanayo, ufumana ithuba lokubonisa i-erudition, chukumisa umdlulisi wakho kunye nomtsalane kwaye ufumane iqabane lomphefumlo. Njengevidiyo yencoko "Masithethe" amantombazana namakhwenkwe - bonke abo bazimisele ukuthatha umngcipheko omncinci kwaye banike ukhetho kwitheko. Iinjongo zazo zonke iindwendwe azifani, kodwa asithandabuzi ukuba kwinkonzo yethu ungadibana nabantu obanikayo ebomini bakho, kwaye, mhlawumbi, entliziyweni yakho.Ukuba unesithukuthezi, ukuba akukho mood, ukuba ufuna ukudlala ngokufudumeleyo okanye unxibelelwano olunyanisekileyo, zive ukhululekile ukuya kwincoko yethu! Ndikholelwe: ubomi bakho buya kuba nomtsalane ngakumbi!
I-roulette yengxoxo yevidiyo: ingxoxo yasimahla
Unxibelelwano yeyona nto ibaluleke kakhulu kwindoda yanamhlanje. Ubomi bethu bunobunzima kwaye ngamanye amaxesha, ukongeza kunxibelelwano lwenene, alikho elinye ithuba lokuthetha nabanye abantu, ukuxoxa ngemicimbi ethile, nokwabelana nje ngaphakathi. Iimpawu zencoko yevidiyo yeRoulette zikuvumela ukuba ufumane i-interlocutor nakweyiphi na indawo yehlabathi kwaye ugcwalise izithuba kunxibelelwano ngokulula nangokufanelekileyo. Thetha ividiyo yencoko xa kufanelekile kwaye kufanelekile kuwe!
Igama elitsha "incoko": yintoni inqaku?
Ngaba ufuna ukwazi ukuba yintoni eheha abantu abaninzi ngeli gama litsha? Ngapha koko, yonke into ilula kakhulu kwaye icacile:
yovuyo yokunxibelelana nabantu abanomdla;
yencoko yevidiyo, ekuvumela ukuba udale inkohliso yonxibelelwano lomntu kwi-bench yepaki okanye kwitafile ye-cafe;
Indlela yokuchitha ixesha lakho lokuzonwabisa inomdla kwaye iyabukeka;
ubuchule bokufumana i-interlocutor yemidla-umthandi weemovie okanye iincwadi, ezinye izihloko.
I-Roulette yeVidiyo yeVidiyo idibanisa amawaka abasebenzisi, kwaye oku kukuxabiseka kwayo. Ukongeza, le ncoko isemanqeni xa uphuhliso lwenzeka yonke imihla, kwaye yonke le nto ngokudibanisa yenza ukuba unxibelelwano lungabi lolomileyo kwaye lungabi nabala, kodwa lube lolokwenyani, luphilise, lube nezinto ezininzi. Ngencoko yeVidiyo yeRoulette uya kukwazi ukuqaqambisa ubusuku ngequbuliso elusizi xa imvula iphaphazela kwisofa ngaphandle kwefestile, kwaye imo yokuhamba ngokukhawuleza iya ku-zero.
Iingxoxo, iincoko, iincoko ...
Popularity yeRoulette - incoko yevidiyo eneli gama sele yaziwa ngokubanzi-iba ngumqondiso wale ndlela yokunxibelelana. Ngeendlela ezininzi, ukusetyenziswa kwekhompyuter kuluntu lwethu, ukufikelela kwi-Intanethi, kunye nokutshintsha kugxininiso kudlala indima. I-roulette yengxoxo yasimahla luyolo lwabangeneleli, kodwa abathandi bancokola ngendlela efanayo de kube sekuzeni kokusa
: Ukulula kokusebenzisa incoko ngokwahlukileyo ngokwahlukileyo. Ke, ukuqala incoko, awudingi ukuhamba ngenkqubo ende yobhaliso, kwaye oku kuyamangalisa nje. I-Chatroulette ifumaneka ngokukhawuleza simahla, kwaye unakho ukunxibelelana ne-interlocutor phantse kwangoko. Inani labasebenzisi liyakhula mihla le, elonyusa ithuba lokudibana nomntu onomdla kwaye uzibonelele ngeencoko ezibonakalayo ixesha elide.
Incoko kunye nomntu ohamba naye
Kuyaziwa ukuba ukuhamba ngololiwe kuhlala kuthatha isigqibo, kwaye oku akuyongozi: umntu osebenza njengohlobo lwe "vest" mamela ngokungakhethi, unika ingcebiso etyibilikayo kwaye unceda ukuthatha isigqibo kwiimeko ezinzima zobomi. I-Chatroulette yinqwelo yakho ende yokubonisa, kwaye umdluliseli wakho liqabane elifanayo.I-
Ubuhle bencoko yasimahla yeRoulette kukuba wonke umntu unokusebenzisa yonke imisebenzi yakhe. Akukho mfuneko yokuba ube ngumsebenzisi we-Intanethi ukuze ufunde imigaqo yeRoulette yengxoxo. Utshintsho olusuka komnye umsebenzi uye kolunye lwenzeka ngokukhawuleza kwaye alunayo nayiphi na imiqobo, oko kuthetha ukuba uninzi lubandakanyeka kolu hlobo lonxibelelwano.
Umbutho, owahlulwe ngumgaqo wokuba lilungu elinye okanye elinye lezakhelo, ngamanye amaxesha useta isikhokelo esingqongqo. Ewe, ukuxoxa ngevidiyo kukunika ithuba lokutyeshela zonke iingqungquthela ezikhoyo zentlalo kwaye ube yinto oyifunayo. Unamahloni kwaye uthatha isigqibo, uqaqambile kwaye uphelile, ulumkile kwaye hayi kakhulu - sonke singabantu abalambele unxibelelwano kwaye sifumana imbewu yabo kuyo. Kule mihla iRussia kukho abantu abaninzi abakulungeleyo ukunxibelelana ngendlela enomdla kwaye bafumane kuyo izibonelelo ezininzi.
Sebenzisa i-Chat Roulette yasimahla inokwenzeka ngoku, ungathandabuzi!
Russian yevidiyo yencoko yevidiyo sisihlandlo sokutshintsha ubomi bakho kwaye uqale unxibelelwano lwemihla ngemihla nabantu abaphuma kumazwe ahlukeneyo. Ividiyo yencoko yokuthandana iya kuba yinto efunyenweyo yokwenene, kwaye iphinde ibe yinto engenakugqalwa kwilizwe elitsha, kwaye ukuthandana kwincoko yevidiyo kuya kuba ngumvuzo wesibindi.
Umntu uhlala kwihlabathi lonxibelelwano rhoqo. Kodwa kukangaphi alikho ixesha elaneleyo okanye umntu ongathethiyo malunga nezilonda. Ngoku yonke le micimbi isonjululwa ngokukhawuleza! Kwanele ukusebenzisa inkonzo yencoko yaseRussia kwi-Intanethi ukufumana indawo efanelekileyo yokunxibelelana kunye nokuthetha nje.
Inyani entsha yenkulungwane yesithathu - igumbi lengxoxo yevidiyo kwi-intanethi. Iincoko ngalo naliphi na ixesha losuku ziya kunika uvuyo kuye wonke umntu ongekazifumani iindlela zonxibelelwano. Ingxoxo yevidiyo ebukhoma yamadoda nabasetyhini beminyaka eyahlukeneyo kunye ne-manani yentlalo-intsha kwiWebhu eBanzi yeHlabathi.
Ingxoxo yeVidiyo Roulette yinkonzo enomdla kwaye eluncedo ekuvumela ukuba uqhelane nomnxibelelanisi onomdla kwaye uchithe ixesha lakho lokuzonwabisa ngaphandle kokushiya ikhaya lakho. Roulette chat ngaphandle ubhaliso ikuvumela ukuba uqale unxibelelwano phantse kwangoko. Wena ngokwakho umisela ixesha lobudlelwane obutsha kwaye awuthwali naziphi na izibophelelo kwiqabane lokuncokola. Umgaqo osisiseko wevidiyo roulette kukukhangela okuzenzekelayo komngeneleli ofanelekileyo. Iseshoni nganye yevidiyo yahlukile kwaye yahlukile!
Bangaphi kuthi abanokuphuma ngaphandle, badibane nomntu benze abahlobo, okanye ubudlelwane? Iiyunithi zoncwadi! Kodwa yonke into iyatshintsha xa sikwi-intanethi. Apho, kwisitalato esibonakalayo, sinokudibana nomntu onomdla ongafaniyo nowethu. Kwaye abo bathanda ukuncokola, kukho izingxoxo.Ewe, kwi-Intanethi, wonke umntu uzabalazela ukuzenzela umfanekiso-ngqondweni. Kodwa musa ukuphelelwa lithemba! Incoko yevidiyo iyakunceda ukunxibelelana kwi-Intanethi nomntu ophilayo, kwaye ungabi nomfanekiso onesidlaliso kunye ne "avatar".
Unxibelelwano kwi-Intanethi kwaye ngakumbi kwincoko ihlala inceda abantu abadumileyo ukuba bazazise, ​​bahlukane neengxaki zonxibelelwano kwaye benze abahlobo abatsha kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, kwaye mhlawumbi bathande ubomi. Kodwa kuyenzeka ukuba sibanjwe ngumdlwenguli "onetyhefu", emva "kokuthetha" nomntu ongafaniyo naye kwincoko yevidiyo- andifuni ukuhlala kwi-Intanethi! Ungahlulahlula njani "ii-troll" kubahambisi abanesidima? Zeziphi iimpawu anokuthi umntu ophikisana naye azenze kwincoko yevidiyo kunye nendlela onokuthi uyaziqonda ngayo kunxibelelwano kwi-Intanethi, eli nqaku liza kukuxelela.
Yintoni ingxoxo yevidiyo? Abo baqhelene neempawu zesicelo esivela ngaphakathi banokukhetha iimpendulo kulo mbuzo ngeendlela ezahlukeneyo. Uninzi luqinisekile ukuba le yindlela yokuchitha ixesha labo lokuzonwabisa, olu luhlobo lokuzonwabisa, ayikho enye into. Nangona kunjalo, kukho abo babenakho ukubona kwincoko yevidiyo ngakumbi impumelelo kunye namathuba. Fumana esinye isiqingatha sakho, wandise iihorons zakho, ngequbuliso uzifumane kwikona eyahlukileyo yeplanethi. Kwaye oku kude kuko konke. Ungafunda njani ukukhangela izibonelelo eziphezulu ekusebenziseni ividiyo yencoko?
Sifuna ukuncokola kwaye andifuni ukuchitha ixesha kwimbalelwano ende, emva koko chatroulette yewebhu yenye indlela elungileyo kuwe. Ngoncedo lwale nkonzo, ilizwe liphela likuvulela, awunamda yexesha, ungathetha kakhulu ngendlela othanda ngayo, kusoloko kunomdla ukunxibelelana nabantu abohlukileyo. Akukho sidingo sokucinga malunga nokubhala, into oza kuyibhala, nokuba unomdla kwi-interlocutor-thetha nje ngekhamera yewebhu kwaye uyonwabele incoko.
Yinto enomdla kubasebenzisi kwi-chat engaziwayo? Mhlawumbi, ngento yokuba wonke umntu oba nenxaxheba anganakho ukukhululeka ngokupheleleyo aze ajike kuye. Kwangelo xesha, akunandaba ukuba injani imeko yakhe kubomi bokwenyani, nokuba yindoda yosapho okanye akunjalo - kwincoko yevidiyo wonke umntu uyalingana, uvuleke ngokupheleleyo, kwaye uzimele geqe nakubani na.
Nxibelelana kunye ne-
Ingxoxo yevidiyo esimahla kunye nabasebenzisi abangaqhelekanga. Vula ikhamera kwaye uqalise ukuncokola namawakawaka abasebenzisi ongazange wababona!
yamkelekile kwihlabathi leCatSpin. Le yinto eqhelekileyo yokuncokola nevidiyo ekunika ithuba elikhethekileyo lokuxoxa amashumi amawaka abantu abangabazi kwihlabathi liphela.Ukuze uqale unxibelelwano, kuyakufuneka ucofe nje kwaye uvule ikhamera yakho yewebhu. Ukongeza, uya kufumana inani elikhulu lezinto ezifanelekileyo kunye nezixhobo eziza kukuvumela ukuba uthathe unxibelelwano kwinqanaba elitsha lonke kwaye wenze ingxoxo yevidiyo ibe yinto ebangela umdla ngakumbi kwaye ingaqhelekanga!
Khetha enye yeefilitha ezininzi kunye nefuthe, okwenza inkqubo yokunxibelelana nabantu ongabaziyo kwingxoxo icace ngakumbi kwaye kumnandi.
Ukukhethwa kwesini somngeneleli
inxibelelana kuphela namantombazana ngokukhetha ukhetho olufanelekileyo phezulu kwifestile yencoko.
Nxibelelana kuphela nabasebenzisi abavela kwilizwe elinye, kunye nakwabo bathetha ulwimi lwakho.
Uya kudinga ukwenza i-, ucofe nje u-. ukuqala ukuncokola nomntu ongamaziyo usebenzisa i-webcam yakho. Ukongeza, uya kufumana ukufikelela kumakhulu emisebenzi eyahlukeneyo kunye nezixhobo eziya kwenza incoko yakho ibe mnandi ngakumbi kwaye ingaqhelekanga!
Guqula umthombo wesandi kunye nevolumu yewebhu yakho, kunye nokuhlengahlengisa umthamo welizwi lomntu othetha naye.
I-Roulette yengxoxo yethu iyafumaneka kuye wonke umntu nakanjani na.
Siceli iinkcukacha zekhadi lakho lebhanki okanye isiqinisekiso sentlawulo. Ungasebenzisa i-ChatSpin ngaphandle kokubhalisa. Le ndlela ikuvumela ukuba ugcine ubucala bakho xa unxibelelana nabantu ongabaziyo kwingxoxo yevidiyo, ukubonelela ngokungaziwa ngokupheleleyo. Awusoze ubonelele ngolwazi lomntu siqu njengenombolo yefowuni okanye idilesi yasekhaya. Ukongeza, sincoma kakhulu ukuba abasebenzisi bethu bangaze babhengeze olo lwazi kwincoko, akukhathaleki ukuba ngubani umnxibelelanisi wakho.
Qala unxibelelwano ngoku
Yonke into ilula ngendlela emangalisayo. Izokuthatha imizuzwana embalwa ukuqala ukunxibelelana nabantu ongabazi abayi-97,009 abangabaziyo usebenzisa ikhamera yakho yewebhu!
roulette yengxoxo yaseRussia yokunxibelelana kwi-Intanethi
Hona uya kufumana ulwandle lonxibelelwano lwe-intanethi lothando okanye ubuhlobo. Ukuqhelana nevidiyo kukhethwa ngabantu abaxabisa ixesha, abahlala kwi-Intanethi uninzi lobomi babo. Incoko ye-roulette kwihlabathi liphela idibanisa indawo kunye nokuthathwa ngokufanelekileyo njengenye yeendlela ezilula, ezikhawulezayo nezona zilula zokwazana.
Kwenza kube lula kubasebenzisi, unganxibelelana nathi ngaphandle kobhaliso, ngena kwiakhawunti zakho kwiinethiwekhi zentlalo. Apha uya kufumana kuphela unxibelelwano olumnandi kunye nabafana kunye namantombazana! Ingxoxo ye-roulette yengxoxo iya kubhenela nakubantu abaninzi ngokuyilwa kwayo okumnandi, ujongano lomsebenzisi kunye nokusebenza ngokubanzi.ru
Usebenzisa inkonzo efana nevidiyo yokuncokola nomntu ongaqhelekanga, unokuncokola nomntu ukusuka nayiphi na ikona yomhlaba wethu usebenzisa ikhamera yewebhu ngexesha langempela. Le nto intsha yaqala ukubonakalisa abasebenzisi bale nkqubo ngenxa yokungaqhelekanga, kuba kunomdla kakhulu ukunxibelelana nomntu ovela kwesinye isixeko okanye ilizwe.
Ngendlela, sele ndibhala ngesihloko esifanayo apha:
Ukusebenzisa ezinye iincoko zevidiyo, uyamenywa ukuba ubhalise, okuthatha imizuzu embalwa yexesha lakho.Emva kokubhalisa, ungonwabela ukunxibelelana ngekhamera yewebhu ngovuyo!
video4at.ru Ividiyo roulette yencoko yaseRussia
eyona ngxoxo yevidiyo ye TOP kakhulu http://video4at.ru. Akukho ntengiso. Kukho imowudi yePremiyamu. Unokukhetha abangeneleli ngesixeko kunye nelizwe. Ewe, anditsho ukuba ungathenga ikhowudi kwaye unike umntu ukufikelela kwi-Premium
Kukho kwakhona ingxoxo yesicatshulwa kunye nemfumba enkulu yeeprofayili kunye namantombazana.
Kazakhstan incoko "GYR-GYR"! Incoko yevidiyo isekwe kwi-injini yeklasi ukusuka kwi-imeyile.ru, nje efakwe kwiphepha. Eli phepha libekwe njengengxoxo yevidiyo yaseKazakhstan, kodwa akukho mntu ukhathaza ukufumana umntu oza kungenelela evela eRussia okanye eUkraine. Ifestile efanelekileyo yokujonga ye-interlocutor, iqhosha le-alamu, yonke into injengoko kufanele
Le ncoko incokola rhoqo nevidiyo yaseRussia kwaye iyindlela yonxibelelwano kulutsha lwanamhlanje. Le ncoko icwangciswe ngokulula. Iifestile ezimbini zivumela ukuba uzibone kunye ne-interlocutor yakho kwisikrini sokubeka esweni. Kufuphi, kukho iwindow yokuthumela umyalezo komnye okanye komnye umphambukisi ..
Kwakhona, unokumakisha isini sakho, kunye nesini somntu osifunayo, ukukhangela kuya kuncitshiswa kwidatha oyinikeyo.
yale ndawo ikunika ithuba lokunxibelelana usebenzisa ikhamera yewebhu kwangaxeshanye nabantu abaliqela ngaphandle kobhaliso. Kule ndawo ungayikhetha i-avatar yakho, bonisa isini, ubudala kunye nesixeko. Ngokweeparamitha ezifanayo, unokukhetha i-interlocutor
Uyicacisile idilesi yakho ye-imeyile kunye negama eligqithisiweyo, ungagcina isimilo sakho kwisiza, kunye nokugcina abafowunelwa kunye neencoko ezifanelekileyo.
Lendawo yethu, njengazo zonke ezinye iincoko zevidiyo, ikunika ithuba lokuncokola nabantu abatsha abanomdla abavela kuso nasiphi na isixeko kwiplanethi yethu. Kuya kufuneka ushiye le ndawo ukuba awuthathi sigqibo sokuvumela ukufikelela kumbhobho kunye nekhamera yewebhu yekhompyuter yakho. Ukubhalisa kule ndawo kufuneka ufake idilesi ye-imeyile kwaye uchaze igama eligqithisiweyo oza kungena kulo, ungazikhethela wena ungena kwi-interlocutor enomdla.
Le ndawo inemithetho yayo, ke kufuneka ubazi ukuze ungaphuli.I-
Le ncoko yevidiyo iswelekile .. Esi sicelo seVidiyo "kunye nengxoxo engacwangciswanga" sikuncede wenza abahlobo abatsha okanye njewaba nexesha elimnandi. Konke okufunekayo kuwe yayikukunxibelelanisa ikhamera yewebhu kwaye ucinezele iqhosha "lokuqala". Emva koko, isicelo sikhetha iqabane lakho. Ukuba awulithandi iqabane, ungahlala ukhangela lo mntu ubethetha naye.
Lolu hlelo alunazo iimodareyitha, ke kule meko awuyi kukhuselwa kwi-inshurensi eyamkelekileyo ukuba ujonge kubantu abaneminyaka engaphezu kwe-18. Njengazo zonke iincoko, ungatshintshiselana ngoko nangoko imiyalezo.
Le sicelo iphinde yaphela, kwaye abantu bayitshintshela kwezinye iinkonzo. Le ncoko yevidiyo yenzelwe ukunxibelelana ngekhamera yewebhu. Akukho nto eyongezelelweyo - iifestile ezimbini zosasazo lwevidiyo, iwindows yokuthumela imiyalezo kwi-interlocutor, kunye nokukwazi ukukhangela i-interlocutor entsha. Ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa kwaye ayifuni kubhaliswa kwangaphambili
Ingxoxo yevidiyo-roulette, ikunika ithuba lokuncokola nabantu abatsha, ngaphandle kokushiya ikhaya lakho. Emva kokubhalisa kwisiza, ungaqala unxibelelwano ngokuchofoza "ukukhangela indawo yokungena". Kananjalo kule ndawo unokujonga iifayile zabasebenzisi bevidiyo, abaya kuququzelela ukhetho lwakho lwe-interlocutor
Akukho nto ingathethekiyo kwisiza, abaphuhlisi bazamile ukwenza unxibelelwano lwakho lube lolona lonwabo kunye nolonwabisayo.
Le nkonzo, ngelishwa, nayo, iye yantsha. Le ndawo yenzelwe ngesiNgesi, ke, abasebenzisi abangenalo ulwazi lolwimi lwesiNgesi baya kufumana ubunzima bokuqonda amacandelo engxoxo yevidiyo. Incoko yevidiyo, njengayo yonke into, ikuvumela ukuba utshintshiselane ngemiyalezo, kunye nokubona umngeneleli ngexesha lokwenyani.
"Masithethe" incoko yevidiyo ikuvumela ukuba uxoxe nabantu ongabaziyo ngokupheleleyo nakweliphi na ikona lomhlaba. Oku kunokwenziwa kusetyenziswa ingxoxo, umbhobho okanye ikhamera yewebhu. Inkonzo yale ndawo ilula kakhulu, kwaye ayifuni ubhaliso kunye nezinye iiseto zencoko ..
Ukucofa iqhosha "fumana isinxibelelanisi" ungaqala unxibelelwano. Kwakhona, "Masithethe" ibonelela ngonxibelelwano kubasebenzisi baseVkontakte, kodwa oku kuyakufuneka ubhalise. Unxibelelwano kule ndawo kulula kakhulu kwaye kumnandi!
Le ncoko yi-analog yeRussia yencoko ye-roulette, eyona nkonzo idumileyo yokuthandana ngokukhawuleza kwevidiyo. Akulula ukubhalisa ngaphambi kokuqala incoko, kwaye kwakhona, ukuba awuvumeli ukufikelela kumbhobho kunye nekhamera yewebhu, kuya kufuneka ushiye indawo le.
Ngoku nje, incoko ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa, akukho nto igabadeleyo kwisiza, ukuze umntu oqalayo akwazi ukufumana isixhobo sengxoxo esincinci.com
Le yindawo yeembono zencoko yevidiyo yokuqala, umbhali wayo aziwa kakhulu. Eyona ncoko yevidiyo ilungileyo, kuba kwangoku ama-20 andikhe ndihlangane nokuba necala elinye. Abantu abaphilayo. Le ncoko yevidiyo yenzelwe abasebenzisi bamazwe ahlukeneyo, kodwa yenzelwe ngesiNgesi. Kuya kuba lula ukuba isaqalayo siqonde isixhobo sengxoxo yevidiyo, abo bayaziyo amabinzana olwimi lwesiNgesi banokuzama. Umdla wale ndawo ulele kwinto yokuba umngeneleli ikakhulu evela kwelinye ilizwe, kwaye ukuba awuthethi ulwimi lwasemzini, akunakulindeleka ukuba uyonwabele unxibelelwano olunje.
Ranetki ru - ividiyo yencoko.
Izithuba ezinxulumene noko:
Roulette yengxoxo-ephezulu ye-20
Chatroulette Sites liqonga elidibeneyo kuzo zonke iisayithi ezilungileyo njengeCou Roulette. Sichithe iiyure ezininzi kwi-Intanethi ukufumana ezona zingxoxo zithandwa kakhulu kwaye siziqokelele zonke ndaweni-nye. Ngoku, ungonwabela ingxoxo yevidiyo kumaqonga ahlukeneyo kunye nayo yonke le nto kwindawo enye!
Ngayo yonke le mithetho mitsha yokuNcokola, abantu abavela kwihlabathi liphela bafuna i- ye-Chat Roulette alternatives. Ukudibana nabahlobo abatsha okanye ukonwaba nje nabantu ongabaziyo. Kwezi sayithi kunemithetho embalwa kakhulu kunye nabasebenzisi ababhinqileyo abangakumbi, ingengabo nje abafana kunye nenani elikhulu lemithetho kangangokuba ngamanye amaxesha unokuvalwa umlomo ngesizathu esingaziwayo!
Our lubonelela nge-20 yezona ndawo zokuncokola ezingcono kakhulu, i- kwaye le yeyona ndlela yokuncokola nabantu ongabaziyo ngaphandle kokuzithuthumbisa ngokuqikelela ukuba yeyiphi eyona ndawo ithandwayo, kwaye ngaphandle kokuchitha ixesha lakho ukuyifumana. Ukuze usebenzise le ndawo, nqakraza ngokulula kwenye icons kwicala lasekunene kwaye unikeze ukufikelela kwikhamera yakho yewebhu, kwaye uya kuqhagamshelwa kwangoko kubantu abangabhalwanga kwindawo eku-intanethi.
Zonke iziza ezidweliswe apha ziphononongwa kuthi, kwaye sinika inkcazo kuyo nganye nganye. Ngoku, awuzukuchitha ixesha lakho, kwaye unokuthatha isigqibo ngokulula sokuba yeyiphi na indawo enomdla onayo kwisiza sethu. Ke ulinde ntoni? Cofa kwi icon ngasekunene kwaye uqalise ukuncokola namawakawaka abasebenzisi ngoku!
Ividiyo yencoko yababini.
Ingxoxo yeVidiyo ezimbini ezingama- ziya kukusindisa kwisizungu, esiba sisibetho senkulungwane yama-21. Le mvakalelo ichaphazela abantu abakubudala obahlukileyo: abakwishumi elivisayo, ukuba akukho kuqonda kuxabana nabazali babo; abantu abancinci abaphulukene nosapho okanye umsebenzi; abantu abakwiminyaka yobudala obuqolileyo ababenabo ubomi; abantu abadala abantwana abalibeleyo. Wonke umntu uza kuza kuncedo kwi-Intanethi, njengendlela yanamhlanje yokunxibelelana kwihlabathi liphela, eyinkonzo enje ukuba masithethe okanye ividiyo yencoko yababini.Akukho sidingo sokufaka inkqubo, vele ufake umbuzo wakho kwibha yokukhangela yesikhangeli:
yencoko yevidiyo ezimbini 18.
ingxoxo engaziwayo yevidiyo ezimbini, i-
yencoko yevidiyo ezimbini ngaphandle kobhaliso,
yencoko yevidiyo yasimahla emibini,
chat ngaphandle kobhaliso lwasimahla,
incokole kunye nge-webcam yasimahla,
chat kunye namantombazana aseRussia